नेपालीहरुको करोडौ ठगेर रुवाउने ठग जापानमा रमाउदै , रविको दिए चेतावनी ( भिडियो सहित )……….
Home ताजा खबर नेपालीहरुको करोडौ ठगेर रुवाउने ठग जापानमा रमाउदै , रविको दिए चेतावनी ( भिडियो सहित )……….
September 23, 2018 , ठीकठाक रिपोर्टर	, 1 Comment
रबि लामिछाने जापान पुगेका छन्। ‘सीधाकुरा जनतासँग कार्यक्रम ‘ का संचालक रबि नेपाली हरुको दुख सुख बुझ्न र समस्या बुझ्न पुगेका छन्। एक कार्यक्रमका दौरान जापान पुगेका रविको टोलि ले जापानमा धेरै नेपालीले आफ्नो समस्या जापानमा भएका विसंगति बेथिति का बारेमा सुनाएका थिए।
यसै प्रसंगमा नेपालबाट रोजगारीका लागि जापान लैजाने प्रलोभनमा देखाउदै करोडौँ ठगि गर्दै आएका गोविन्दा तिवारीका बारेमा रविको टोलीले जापानमा रहेका उच्च सरकारी अधिकारि संग कुरा गरेका छन्। यस अघि नै नेपाली दाजुभाई र दिदिबहिनि लाइ जापानमा काम लगाइदिने भन्दै लाखौ ठग्ने तिवारीको मुद्दा के हुदैछ भनेर सिधा कुराको टोलीले २ घण्टा सम्म बार्ता गरेको थियो।
जापान सरकारी टोलीले यस बारेमा काम भैरहेको तर बैठक गोप्य हुनुपर्ने र समय आएपछि सबै कुरा खोलिने सर्तमा रबि सहितको टोलि लाइ बार्ता गर्ने समय दिएको थियो। सर्त बमोजिम बार्ता गर्दा जापानमा रहेका सयौ नेपाली को नाममा विभिन्न किसिमको मुद्दा रहेको जानकारी समेत दिएको थियो। नेपाल मा रहेको सयौ सिधा सधालाई जापानमा काम दिलाइदिने भन्दै करोडौ ठगेर रुवाउदै आफु भने जापानमा नाच्दै गरेका गोविन्द तिवारी को पर्दाफास समेत गरेका छन्।
सयौ नेपालीहरुको करोडौ ठग्ने तिवारी भने बिदेशमा मस्त रमाई रमाई नाचेको भिडियो सार्बजनिक भएको छ। अरुलाई ऋण मा डुबाएर आफु बिदेशमा मोज मस्तीमा तल्लिन रहेका र कसै संग पनि त्रास नमान्ने प्रवृति उनमा देखिएको छ। डा. क्रिस त्रिपाठीका नाम ले आफुलाई चिनाउदै गोविन्द तिवारीले गोरखाकी अमृता ढकाल, झापाकी सुमी राई, कास्कीकी निशा केसी लगाएत थुप्रै व्यक्तिलाई समेत ९ लाखदेखि ४६ लाखसम्म ठगिसकेका छन्। गोबिन्द तिवारीले तेही व्यक्ति हुन जसले आफुलाई समातेर देखाउन नेपाल सरकारलाई नै चुनौती समेत दिएका थिए ।
नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमा गोविन्द तिवारका नाममा रेड नोटिश जारी गरिसकेको छ । समय समयमा फोन नम्बर परिवर्तन गर्दै जापानमा लुकिछिपी बस्दै आएका तिवारी धेरैलाई रुवाएर आफु भने जापानमा मस्ती गर्दै छन् ।
माइतीघर आएको युवती बलात्कृत, तीन लाखमा मिलापत्र
काँक्रो खान जादा बालिकाले गुमाउनु पर्यो खुट्टा , भयो यस्तो दुर्भाग्य
Posted in ताजा खबर.
आलुको बोरामा ७१ लाख भारतीय रुपैयाँ ल्याउदै गर्दा पक्राउ
परपुरुषसँगको सम्बन्धबाट जन्मेको शिशुको हत्या गर्ने आमा पक्राउ
विषालु च्याउ खाएर बिरामी परेका ११ जनामध्ये ३ को उपचारकै क्रममा निधन
पोखरामा भेटिइन यस्तो जादुमय स्वरकि धनि, मान्छे राम्री स्वर झन् खतरा…….. भिडियो
June 12, 2019 , ठीकठाक रिपोर्टर , No Comment
Watch this video and share it .